देशकै उत्कृष्ट हरियालि वनको वृत्तचित्र प्रदर्शन - ePosttimes
Home१ नम्बर प्रदेशदेशकै उत्कृष्ट हरियालि वनको वृत्तचित्र प्रदर्शन
२५ असार २०७७, बिहीबार १७:२७ १ नम्बर प्रदेश, समाज 0
असार-२५, मोरङ । नेपालकै उत्कृष्ट हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वृत्तचित्र बिहिवार मोरङको पथरीमा प्रदर्शन भएको छ ।
मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका स्थित हरियाली सामुदायिक वन २०७६ मा नेपालकै उत्कृष्ट घोषणा हुँदै वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापनमा गणेशमान सामुदायिक वन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । नेपालको संघीय वन मन्त्रालय अन्तरगत वन विभागले प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट वन घोषणा गर्दछ । पथरीको हरियाली वन त्यस अघिपनि राष्ट्र ब्यापी सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । नेपालको प्रथम घोषणा भएपछी मेचीदेखी महाकाली सम्मबाट अध्ययन भ्रमणमा आउने गरेका छन ।
देशकै उत्कृष्ट सामुदायिक वन हरियालीको ५० मिनेटको वृत्तचित्र “हरियाली वन” निर्माण भएको छ ।
वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन, सामाजिक, भौतिक, बिकास, गरिबी निबारणको कामहरु, भावी योजना, त्यहाँ पाइने, जंगली जनावर र रुख विरुवा लगायतको बिषय समेटेर वृत्तचित्र निर्माण भएको हो ।
प्रदर्शनपछि सब-डिभिजन वन कार्यालय पथरीका प्रमुख महोमद अलाउदिनले वृत्तचित्र छिमेकी सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरु, जनप्रतिनिधिहरु समेत बोलाएर देखाउनु पर्ने बताए ।
वन समूका अध्यक्ष काबुलबहादुर मगरले वृत्तचित्र राम्रो बनेको भन्दै निर्माण पक्षको प्रशंसा गरे । वृत्तचित्र पुन प्रदर्शन गरिने बताए ।
प्रदर्शन कार्यक्रममा समूहका पूर्व अध्यक्षहरु कर्णबहादुर गुरुङ, देबिप्रसाद भेटवाल, रिता गिरी, वर्तमान पदाधिकारी, सल्लाहकार र दुई सय बढी उपभोक्ताहरु सहभागी रहेका थिए ।
वृत्तचित्रको स्कृप्ट लेखन अर्जुन जम्नेली राई, निर्देशन शन्तोष राई, छायांकन करण धिताल, आवाज प्रस्तुति बबिता राई र दृश्य सम्पादन ईस्वर दुलालले गरेका छन ।
वृत्तचित्रमा जंगली जनावर, विभिन्न प्रजातिका चराहरु, कछुवा, सर्पहरु र वैज्ञानिकको आकर्षक दृश्यहरु समेटिएको समूहको कार्यलय सचिव लिला गुरुङले बताए ।
समूहले हरियालीकै मातहत रहने गरि हरियाली सामुदायिक वन प्रा.लि. गठन गरेर २० करोडको लगानीमा पर्यटन बिकासको लागि पूर्बाधार निर्माण सुरु गरेको छ ।
हरियाली वन, उपभोक्ताहरु, नगरका स्थानीय बासिन्दा, नगरपालिकालाई शेयर रकम संकलन गरेर भौतिक पूर्बाधार निर्माण सुरु गरेको हो । कम्पनीमा पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले चार करोड शेयर लगानी छ ।
मुख्य सडकसँग जोडिएको हरियाली कम्पनीले आकर्षक छहरा, गार्डेन, स्वीमिङ पुल, बोटिङङ तथा पिकनिक स्पट निर्माण गर्दैछ ।
पर्यटनसंगै कृषि बिकासमा जोड दिने अध्यक्ष मगरले बताउदै आएका छन ।
424800cookie-checkदेशकै उत्कृष्ट हरियालि वनको वृत्तचित्र प्रदर्शनyes
किरात प्रदेशको लागि आँधिबेहेरी सिर्जना गर्नुपर्छः तिलक राई प्रदेश १ को कोरोना जनसुरक्षा कोषमा ११ करोड ६५ लाख जुट्यो प्रदेश १ मा आईसोलेसनबाट ११ जना डिस्चार्ज, ६९ को रिर्पोट नेगेटिभ प्रदेश १ मा क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या थपियो, स्वाब परीक्षण संख्या पनि बढ्दै स्व राजकुमारको परिवारलाई प्रबासबासीको १ लाख ३८ हजार ९ सय ३ रुपैया सहयोग कुलमान घिसिङ र डा. गोबिन्द के.सी.को समर्थनमा मोटरसाइकल र्याली खुवालुङ्क बचाऊ भन्दै नौ जातीय संस्थाले मूख्यमन्त्रीलाई ध्यानकार्षण पत्र बुझायो
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यासँगै संक्रमणको दर घट्यो